Wasiirka amuura Dibada JSL Oo Sharaxaad Ka Bixiyay Sababaha ay Xukuumadda Somaliland Ku Taageertay Xulufada Sucuudiga |
Wasiirka amuura Dibada JSL Oo Sharaxaad Ka Bixiyay Sababaha ay Xukuumadda Somaliland Ku Taageertay Xulufada Sucuudiga
Hargeysa(GNN)-Wasiirka arrimaha dibada Somaliland Dr Sacad Cali Shire ayaa ka jawaabay su’aalo ay shacabka Somaliland iska waydiinyaan sababta ay dawlada Somaliland u kala taageertay dalalka Khaliijka maddaama oo aanau midkoodna aqoonsanayn madaxbanaanida Somaliland.
Wasiiir Sacad waxa uu sheegay in Somaliland mar,ii a y qaadanaysay go’aankan ay garab istaagtay ay ka eegtay laba dhinac oo ah siyaasadd iyo dhaqaale.Wasiirka oow araysi gaar ah siiyey wargeyska Geeska Afrika waxa kale uu ka hadlay sababta uu uga mid noqon waayey Waftiga madaxwayne Siilaanyo ee safarka ku tagey Imaaraadka madaama oo uu yahay wasiirka Arrimaha Dibada Somaliland,waxaana waraysiga Sacad Cali Shire uu u dhacay sida tan
Su’aal:- Khilaaf siyaasadeed ayaa kala dhex galay wadamada Khaliijk,markaas mawqifka Somaliland ee khilaafkaasi siyaasadeed ka waran?
Jawaab:- Haa waa dhab oo khilaaf baa kasoo cusboonaaday balse inagu waddan ahaan go’aan banu ka qaadanay ah inaynu taageerno xulufada uu Sucuudigu hogaaminayo.
Su’aal:- Xulufada uu Sucuudigu hogaaminayo iyo wadanka Qatar midna inama ictiraafsana oo jiritaanka iyo madaxbaanida Somaliland ma aqoonsana,markaas waa maxay sababta aad xukuumadd ahaan ugu kala hiiliseen madaama oo aanay midna Qaranka Somaliland aqoonsanayn?
Jawaab:-Inagu markii aynu go’aanka qaadanaynay waxayny ka eegnay dhinaca Siyaasadda iyo Dano dhaqaalaba,sababtoo ah wadanka Sucuudigu waa wadanka ugu way nee aynu xoolaha u dhoofino ee ay xoolaheenu ku xidhan yihiin,waana wadan ay inaga dhaxeeyaa xidhiidh Taariikhi ah,markaas mawqifka aynu qaadanay waa Mawqif siyaasi ah oo ku salaysan danteena Somaliland
Su’aal:-Madaxwaynaha Somaliland safar kadis ah oo gaar ah ayuu ku tagey Imaaraadka Carabta markaas waa maxay ujeedada Safarkiisu?
Jawaab:-Madaxwaynaha Safarkiisu waa safar gaar ah kolay madaama oo uu yahay madaxwaynihii Qaranka Somaliland dabcan hawlaha Qaranka inta uu joogo wuu galayaa
Su’aal:-Madaama aad tahay wasiirkii Arrimaha dibada Somaliland maxaa sababay inaad ka hadho oo aad qayb ka noqon waydo safarka madaxwaynaha?
Jawaab:-Madaxwaynaha safarkiisu waxa uu ahaa mid gaar ah,hadii uu safarkiisu yahay mid gaar ahna wax dhiba oo ku jira inaad ka hadho ma jirto
Su’aal:-Komishanka Doorashooyinka wakhtigii doorashada madaxtooyadu dhici lahayd way iclaamiyeen madaxwaynuhuna Wareegto ayuu ku dhaqan galiyey markaas Malaga yaabaa in Doorashadu mar kale dib u dhacdo?
Jawaab:-Qadar ALLE oo dhaca mooyee,lagama yaabo inay doorashadu dib u dhacdo,inaga xageena waa ka diyaar guddiga Doorashada,dawlada,xisbiyada iyo shacabkuba diyaar bay u yihiin markaas doorasho hadii Alle idmo wakhtigeeda ayey dhici doontaa.
Su’aal:-Beesha Caalamku gaar ahaan wadamada Somaliland ka caawiya Doorashooyinka,xukuumadda marar badan bay ku canaanteen dib u dhac ku yimid doorashada hadda tolow ma jiraan wax Kharash ah oo ay Somaliland ka caawinayaan si doorashadu u qabsoonto?
Jawaab:-Kharashka Doorashadu waxii hadda ka hadhay ama Kaadh qaybinta ha ahaato ama maalinta Doorashada la galaayo ha ahaatee taas inaga ayaa bixinayna,kharashka doorashooyinkuna wuu badnaa madaama oo dhawr jeer dib loo dhigay kharashkuna uu intii ka badnaa,laakiin wali way ina caawinayaan laakiin Kharashka Bucda leh ee hadhay dawlada ayaa bixinaysa.
Su’aal:-Xidhiidhka Beesha Caalamka iyo Somaliland xiligan ka waran?
Jawaab:-Xidhiidh aad u fiican ayaa inaga dhaxeeya guud ahaan Caalamka,Wadamada jaarka nahay,Wadamada Afrika,Yurub iyo Maraykanka,mar walbana hadafka dawlada Somaliland waa sidii ay u horumarin lahayd xidhiidhka Beesha Caalamka,waxayna Marti uga nahay Caalamka inay madaxbanaanideena iyo Jiritaankeena Qiraan.
Su’aal:-Maxaad guud ahaan shacabka Somaliland ugu baaqaysaa?
Jawaab:-Shacabka waxaan ugu baaqayaa midnimo,madaama oo aynu ku jirnoTobankii cisho ee Danbe ee Bisha Ramadan,waxaan alle ka baryaynaa inuu inaga dul qaado dhibaatooyinka ay kamid yihiin raadkii ay abaartu inagaga tagtay ee ay kamid tahay Shuban Biyoodka,shacabkana waxaan leeyahay nabadgaliyada ku dadaala.